Honduras · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Honduras
Honduras: Nosamborina i Zelaya Ary Noesorina Tsy Ho Filoha
Vao maraina no nandresesam-baovao manerana an'i Honduras fa nosamborin'ny miaramila tao an-tranony ny filoha Mel Zelaya.
Costa Rica15 Marsa 2020
Tantara mikasika ny Honduras
Fanampenam-bava 22 Mey 2020
Fifindràmonina 20 Febroary 2020
El Salvador 21 Novambra 2018
Mediam-bahoaka 31 Oktobra 2018
Fifidianana 19 Oktobra 2018
Honduras: Fampidirana ho an'ireo Blaogy au Honduras – Ampahany faha-3
Hevitra 17 Oktobra 2018
Tanora maro ao Honduras maro no mitoraka blaogy ankehitriny, ary mitobaka be ireo blaogy manokana amin'ny teny Espaniola. Fanambin'ireo ny fizarazarany ho anaty sokajy. Maro ireo fampidirana no miresaka mikasika ny zavatra rehetra na zavatra iray manokana, ny tapa-tsarimihetsika farany indrindra natao ho dokambarotran'ilay sarimihetsika, tantaram-pianakaviana, ary dokambarotra mafanafana mihitsy aza. Ity misy santionany amin'ireo blaogy be dia be nokarohako. Ao amin'ny fizarana faha-3 amin'ity fampidirana ny tontolon'ny blaogy ao Honduras ity, ifantohana ny mikasika ny lohahevitra manokana sy andavanandro.